Vaovao - Raharaha maromaro mila fiheverana amin'ny fametrahana gasket
Ny gasket dia ampahany famehezana static izay mamaha ny "fihazakazahana, famoahana, fitetezana ary famoahana". Satria maro ny rafitra famehezana static, arak'ireo endrika famehezana static ireo, gasket fisaka, gasket elliptical, gasket lens, gasket cone, gasket cair, O-peratra, ary gasket famehezana tena samy hafa no niseho araka izany. Ny fametrahana marina ny gasket dia tokony ho tanterahina rehefa ny firafitry ny flange na ny firafitry ny kofehy mifamatotra, ny valin'ny famehezana static ary ny gasket dia tsy isalasalana fa voamarina, ary ny faritra valves hafa dia simba.
1. Alohan'ny hametrahana ny gasket dia apetaho vovoka grafit na vovo-grafita mifangaro menaka (na rano) amin'ny faritra misy famehezana, gasket, kofehy ary bolt ary ireo faritra mihodina. Ny gasket sy grafita dia tokony hadio hatrany.
2. Ny gasket dia tsy maintsy apetaka eo amin'ny sehatry ny famehezana ho afovoany, marina, tsy tokony hivily lalana, tsy hivelatra amin'ny lavaka valizy na hipetraka amin'ny soroka. Ny savaivony anatiny amin'ny gasket dia tokony ho lehibe kokoa noho ny lavaka anatiny amin'ny haben'ny famehezana, ary ny savaivony ivelany dia tokony ho kely kely kokoa noho ny savaivony ivelany amin'ny haben'ilay famehezana, mba hahazoana antoka fa voafintina mitovy ny gasket.
3. Sombin-tsolika iray ihany no azo apetraka, ary tsy avela hametaka sombin-javatra roa na maromaro eo anelanelan'ny velaran'ny famehezana izy ireo mba hialana amin'ny tsy fahampian'ny elanelana eo amin'ny sehatry ny famehezana roa.
4. Ny gasket oval dia tokony hasiana tombo-kase mba hifandraisan'ny peratra anatiny sy ivelany an'ny gasket, ary ny tendrony roa an'ny gasket dia tsy tokony hifanerasera amin'ny fanambanin'ny alitara.
5. Ho an'ny fametrahana peratra O, afa-tsy ny peratra sy ny fantsom-panafody dia tokony hahatratra ny fepetra takiana amin'ny famolavolana, ny habetsaky ny famatrarana dia tokony ho mety. Ny fisosan'ny peratra O lava-by amin'ny ankapobeny dia 10% ka hatramin'ny 40% amin'ny ankapobeny. Ny tahan'ny fihenan'ny tsimoramora an'ny peratra O-peratra dia cylindrical. Ny tombo-kase tombo-kase amin'ny tapany ambony dia 13% -20%; ny tampon'ny famehezana static dia 15% -25%. Ho an'ny tsindry anatiny lehibe, ny deformation de compression dia tokony ho avo kokoa rehefa mampiasa banga. Amin'ny alàlan'ny fiantohana ny famehezana azy, ny kely kokoa ny tahan'ny fihenan'ny tsindrona, ny tsara kokoa, izay afaka manitatra ny andian'ny O-peratra.
6. Ny valizy dia tokony ho amin'ny toerana misokatra alohan'ny hametrahana ny gasket eo amin'ny fonony, mba tsy hisy fiantraikany amin'ny fametrahana sy hanimba ny valva. Rehefa manidy ny fonony dia ampifanaraho ny toerana, ary aza mifandray amin'ny gasket amin'ny alàlan'ny fanosehana na fisarihana mba hialana amin'ny famindran-toerana sy ny gorodon'ny gasket. Rehefa manamboatra ny toeran'ny fonony ianao dia tokony hampiakatra moramora ny fonony, ary avy eo ampifanarahina moramora.
7. Ny fametrahana gasket mifatotra na kofehy dia tokony ho toy izany fa ny gasket dia amin'ny toerana marindrano (ny fonosana gasket ho an'ny fifandraisana misy kofehy dia tsy tokony hampiasa fantson-drano raha toa ka misy toerana misy azy ireo). Ny fanamafisana ny visy dia tokony hampiasa fomba simetrika, mifandimby, ary na dia ny fandidiana aza, ary ny fehikibo dia tokony hofehezina tanteraka, milamina ary tsy malalaka.
8. Alohan'ny hamoretana ny gasket, ny tsindry, ny maripana, ny fananan'ny mpanelanelana ary ny toetra mampiavaka ny gasket dia tokony ho takatra mazava tsara mba hamaritana ny hery nanamafisana mialoha. Ny hery mialoha ny fanamafisana dia tokony hahena araka izay azo atao, raha tsy mivoaka ny fitsapana faneriterena (ny hery manery mialoha ny fanamafisana dia hanimba mora foana ny gasket ary hahatonga ilay gasket tsy hahazaka intsony).
9. Aorian'ny fanamafisana ny gasket dia tokony ho azo antoka fa misy elanelana mialoha ny fametahana ilay sombin-kazo mampitohy, mba hisy toerana azo hanamafisana mialoha rehefa mivoaka ny gasket.
10. Rehefa miasa amin'ny maripana ambony dia hiaina mandady amin'ny hafanana be ny bolts, miala sasatra amin'ny fihenjanana, ary mihombo ny fiovan'ny toetr'andro, mitarika amin'ny famoahana ny entona ary mitaky fanamafisana ny hafanana. Mifanohitra amin'izany, amin'ny toe-piainana ambany ny mari-pana dia hihena ny kofehy ary mila vahana ny hatsiaka. Ny fanamafisana ny hafanana dia ny fanerena, ny famahana mangatsiaka dia fanamaivanana ny tsindry, ny fanamafisana ny hafanana ary ny famahana ny hatsiaka dia tokony hatao aorian'ny fitazonana ny hafanan'ny miasa mandritra ny 24 ora.
11. Rehefa ampiasaina ny etona gasket amin'ny haben'ny famehezana dia tokony hodiovina na hositranina ny velaran'ny famehezana. Ny haavon'ny famehezana fisaka dia tokony hifanaraka aorian'ny fikosoham-bary, ary ny adhesive dia tokony hampiharina mitovy (ny adhesive dia tokony hifanaraka amin'ny fepetra miasa), ary ny rivotra dia tokony esorina arak'izay azo atao. Ny sosona adhesive amin'ny ankapobeny dia 0.1 ~ 0.2mm. Ny kofehy visy dia mitovy amin'ny velaran'ny famehezana fisaka. Ireo velaran'ny fifandraisana dia tsy maintsy mifono. Rehefa misolelaka dia tokony atao amin'ny toerana mijidina mba hanamorana ny famoahana ny rivotra. Ny lakaoly dia tsy tokony ho be loatra mba hisorohana ny fandosirana sy fandokoana valves hafa.
12. Rehefa mampiasa kasety horonantsary PTFE amin'ny famehezana kofehy, ny teboka fanombohan'ny sarimihetsika dia tokony haparitaka manify ary apetaka amin'ny vatan'ny kofehy; avy eo ny tape diso tafahoatra amin'ny teboka fanombohana dia tokony hesorina mba hahatonga ny sarimihetsika hifikitra amin'ny kofehy ho endrika wedge. Miankina amin'ny elanelana misy ny kofehy, matetika dia maratra 1 ka hatramin'ny in-3 izy io. Ny làlana mihodinkodina dia tokony hanaraka ny lalana ahodina, ary ny teboka farany dia tokony hifanindry amin'ny fiatombohana; misintona moramora ny sarimihetsika amin'ny endrika wedge, amin'izay ratra mitovy ny hatevin'ny sarimihetsika. Alohan'ny hidiranao, kitiho ny sarimihetsika amin'ny faran'ny kofehy mba hahafahan'ny horonan-tsarimihetsika hiditra ao anaty kofehy anatiny miaraka amin'ny visy; ny miolakolaka dia tokony ho miadana ary ny hery dia tokony ho mitovy; aza mihetsika intsony aorian'ny fanamafisana, ary aza mihodina, raha tsy izany dia ho mora ny mamoaka.